ရွှေတံဆိပ် သုံးခု ရခဲ့ပေမယ့် ဝတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးက အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်မှန် – Sharing
ရွှေတံဆိပ် သုံးခု ရခဲ့ပေမယ့် ဝတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးက အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်မှန်
Dr Mrs Mg | December 14, 2019 | သတင်း | No Comments
အပြေးပြိုင်ပွဲမှာ ရွှေတံဆိပ် သုံးခု ရခဲ့ပေမယ့် ဝတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးက အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်မှန်
အားကစားသမားတွေအတွက် မိမိနှစ်သက်ရာ အားကစားနည်းတွေ အလိုက် အထောက်အကူပစ္စည်းတွေ လိုပါတယ်…ဥပမာ ဘောလုံးသမားဆိုရင် ဘောလုံးကန်ဖိနပ်..ပြေးခုန်ပစ်သမားဆိုရင် ပြေးတဲ့ဖိနပ်စသဖြင့် လိုအပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီဘက်ခေတ်မှာ အားကစားပစ္စည်းတွေကလည်း ဈေးကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်….တချို့အားကစားသမားလေးတွေဟာ အားကစားဖိနပ်မဝယ်နိုင်လို့ ဖြစ်သလို လေ့ကျင့်နေရတဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ…..
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့ ဖိနပ်တွေကို ဝယ်စီးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမရှိပေမယ့်လည်း ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ မိမိကြိုးစားမှုနဲ့ အောင်မြင်မှုရနိုင်ကြောင်းကို ဖိလစ်ပိုင်က ၁၁ နှစ်သမီးလေးတစ်ဦးက သက်သေပြခဲ့ပါတယ်….
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၊ Balasan မှာနေထိုင်တဲ့ Rhea Bullos လို့ခေါ်တဲ့ သမီးလေးဟာ အပြေးပြိုင်ဖို့အတွက် ဖိနပ်မရှိတာကြောင့် သူမရဲ့ခြေထောက်တွေကို ပတ်တီးတွေနဲ့ ပတ်ပတ်လည်စီးပြီး အားကစားဖိနပ်ပုံစံ စည်းနှောင်ခဲ့ပါတယ်….
ဒါ့အပြင် အဲဒီဖိနပ်ပုံဖြစ်သွားတဲ့ ပတ်တီးတွေပေါ်မှာ ဘောပင်လေးနှင့် ‘Nike ‘ အမှတ်တံဆိပ်ပုံ ရေးဆွဲပြီး အဆိုပါဖိနပ်လေးနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်…သူ့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေကတော့ အားကစားဖိနပ်ကိုယ်စီနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပါ…
ဒါပေမဲ့ လူသာ ပဓာနဆိုတာကို အဲဒီ သမီးလေးက သက်သေပြသွားပြီး မီတာ ၄၀၀ မီတာ ၈၀၀ နဲ့ မီတာ ၁၅၀၀ ပြိုင်ပွဲ ၃ ခုမှာ ရွှေတံဆိပ်ဆု ၃ ခု ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်….
ဖိနပ်မရှိပေမယ့်လည်း လူရဲ့ ကြိုးစားမှုက ဘာမဆိုအောင်မြင်နိုင်တာကို သက်သေပြသွားတဲ့ သမီးလေးဟာ အနာဂတ်မှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး SEA Games ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
ကြိုးစားမှုနဲ့ အတူ သမီးလေးရဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်..ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း မိမိမှာ ပြည့်စုံတာ မပြည့်စုံတာတွေ မတွေးဘဲ လူသာ ပဓာန ဆိုတာ ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကြည့်ပြီး ကြိုးစားအားထုတ်အတုယူနိုင်ကြပါစေနော်..
credit -Writer – HW (Shwe Yaung Lan )Source worldofbuzz
အားကစားသမားတှအေတှကျ မိမိနှဈသကျရာ အားကစားနညျးတှေ အလိုကျ အထောကျအကူပစ်စညျးတှေ လိုပါတယျ…ဥပမာ ဘောလုံးသမားဆိုရငျ ဘောလုံးကနျဖိနပျ..ပွေးခုနျပဈသမားဆိုရငျ ပွေးတဲ့ဖိနပျစသဖွငျ့ လိုအပျတာပဲ ဖွဈပါတယျ…
ဒီဘကျခတျေမှာ အားကစားပစ်စညျးတှကေလညျး ဈေးကွီးလာတာဖွဈပါတယျ….တခြို့အားကစားသမားလေးတှဟော အားကစားဖိနပျမဝယျနိုငျလို့ ဖွဈသလို လကေ့ငျြ့နရေတဲ့ အခွအေနတှေလေညျး ရှိတယျလို့ ဆိုရမှာပါ…..
ဒါပမေဲ့ ဒီလိုတနျဖိုးကွီးတဲ့ ဖိနပျတှကေို ဝယျစီးနိုငျတဲ့ အခွအေနမေရှိပမေယျ့လညျး ပွိုငျပှဲတဈခုမှာ မိမိကွိုးစားမှုနဲ့ အောငျမွငျမှုရနိုငျကွောငျးကို ဖိလဈပိုငျက ၁၁ နှဈသမီးလေးတဈဦးက သကျသပွေခဲ့ပါတယျ….
ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ ၊ Balasan မှာနထေိုငျတဲ့ Rhea Bullos လို့ချေါတဲ့ သမီးလေးဟာ အပွေးပွိုငျဖို့အတှကျ ဖိနပျမရှိတာကွောငျ့ သူမရဲ့ခွထေောကျတှကေို ပတျတီးတှနေဲ့ ပတျပတျလညျစီးပွီး အားကစားဖိနပျပုံစံ စညျးနှောငျခဲ့ပါတယျ…
ဒါ့အပွငျ အဲဒီဖိနပျပုံဖွဈသှားတဲ့ ပတျတီးတှပေျေါမှာ ဘောပငျလေးနှငျ့ ‘Nike ‘ အမှတျတံဆိပျပုံ ရေးဆှဲပွီး အဆိုပါဖိနပျလေးနဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျခဲ့ပါတယျ…သူ့ရဲ့ ပွိုငျဘကျတှကေတော့ အားကစားဖိနပျကိုယျစီနဲ့ ယှဉျပွိုငျခဲ့ကွတာပါ…
ဒါပမေဲ့ လူသာ ပဓာနဆိုတာကို အဲဒီ သမီးလေးက သကျသပွေသှားပွီး မီတာ ၄၀၀ မီတာ ၈၀၀ နဲ့ မီတာ ၁၅၀၀ ပွိုငျပှဲ ၃ ခုမှာ ရှတေံဆိပျဆု ၃ ခု ရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ….
ဖိနပျမရှိပမေယျ့လညျး လူရဲ့ ကွိုးစားမှုက ဘာမဆိုအောငျမွငျနိုငျတာကို သကျသပွေသှားတဲ့ သမီးလေးဟာ အနာဂတျမှာ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံကို ကိုယျစားပွုပွီး SEA Games ပွိုငျပှဲတှမှော ပါဝငျယှဉျပွိုငျလိုတယျလို့ ဆိုပါတယျ…
ကွိုးစားမှုနဲ့ အတူ သမီးလေးရဲ့ ဆန်ဒတှေ ပွညျ့ဝပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျရပါတယျ..ပရိသတျကွီးတို့လညျး မိမိမှာ ပွညျ့စုံတာ မပွညျ့စုံတာတှေ မတှေးဘဲ လူသာ ပဓာန ဆိုတာ ဒီအဖွဈအပကျြလေးကွညျ့ပွီး ကွိုးစားအားထုတျအတုယူနိုငျကွပါစနေျော..
နောငျတခြိနျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနရောမှာ ဆကျခံနိုငျမညျ့မြိုးဆကျသဈလေး
ရှဆေိုငျကနဆှေဲကွိုးလုပွေးစဉျ မှတျပုံတငျပွုတျကကြနျြခဲ့သဖွငျ့ နာရီပိုငျးအတှငျးရဲတပျဖှဲ့မှဖမျးဆီးရမိခဲ့